किन जान्छन् विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालय छोडेर निजीमा ? - साँचो खबर Online Khabar
लेखक केशव रुपाखेती
नेपालमा शिक्षा प्रदान गर्न दुइ प्रकारका विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । एउटा सरकारी लगानीको सामुदायिक विद्यालय हो भने दोस्रो सरकारको अनुमतिमा सञ्चालन भएको संस्थगत(निजी) विद्यालय । आज मैले चर्चा गर्न खोजेको विषय भनेको सुविधा सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि सामुदायिकलाई छोडेर किन लैजान्छन् अभिभावकले छोराछोरीलाई निजीमा भन्ने हो ।
वर्तमान समयमा हाम्रो नेपाली समाजका मध्यम वर्गिय मानिसका प्रमुख प्राथमिकताको विषय भनेको सन्तानको लागि उचित शिक्षा हो । उनिहरुको मान्यता भनेको सन्तानको लागि गुणस्तरीय शिक्षा हो । अनि उनिहरुले बुझेको, उनिहरुलाई बुझाईएको, उनिहरुले सुनेको त्यो गुणस्तरीय शिक्षा भनेको खरर अंग्रेजी बोल्न सक्ने, डिस्टिङ्सनमा(हालको ४जिपिए) पास हुने, १२ पास पछि अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडाको भिषा लाग्ने प्रकारको शिक्षा । उनिहरुले बुझे अनुसार यी सबै पूरा गर्ने माध्यम निजी विद्यालय हो ।
आफूले पढ्न पाइएन, पढ्न दिइएन र पढ्न पाएपनि राम्रोसँग पढाइएन, त्यही भएर आफू पछि परियो। अब सन्तानलाई त नखाएर भएपनि बोर्डिङमा पढाउने हो, अनि विदेश पठाउने हो । अधिकांश अभिभावकको मुखबाट सुनिने शब्द हो, यो । यहि मान्यतामा रुमलिएको छ आजको अर्ध सम्भ्रान्त समूह ।
के गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा मात्रै जाने हुन् त निजी तिर अभिभावक र विद्यार्थी ? यसको सामान्य चिरफार गर्ने जमर्को गरेको छु ।
पहिलो तथ्य के हो भने अर्ध सम्भ्रान्त परिवारलाई आफू अरु भन्दा विशेष हुँ भन्ने देखाउने होडबाजी र सोख रहेको हुन्छ । यसको लागि समाज र इष्टमित्रको अगाडिको हैसियत अनुसार बाइक, गाडी, महङ्गो मोबाइल, ३२ इञ्च माथिको टेलिभिजनको साथै सन्तानलाई निजि विद्यालयमा भर्ना गर्नु हो । छोराछोरी कहाँ पढ्छन् भन्दा फलानु बोर्डिङमा भन्नुको रवाफ नै उच्च महसुुस हुने मनोविज्ञानले प्रेरित भएको कारण सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरको कारणले भन्दापनि नव सम्भ्रान्त मनोविज्ञानको कारणले उपेक्षित भयो ।
दोस्रो तथ्य, पेशागत सुरक्षा र जिम्मेवारी पनि अर्को प्रमुख कारण हो । अधिकाँस निजी विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी नियूक्तिको मापदण्ड भनेको स्वयं सञचालक हुन् ।उनिहरुले आफ्नो सर्तअनुसार शिक्षक नियूक्त र बर्खास्त गर्ने हुनाले वेरोजगार हुनुपर्ने संत्रासले पनि इमानदार पूर्वक कार्य गरेको देखिन्छ । यसको परिणाम स्वरुप निजी विद्यालयको प्रशासन चुस्त देखिन जान्छ र यस घटनाले अभिभावकमा शैक्षिक गुणस्तरको विस्वास पर्न जान्छ । अर्को तर्फ सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियूक्ति र बर्खास्तको जिम्मेवारी सरकार र यसका मातहतका निकायहरु हुन्। जसको फलस्वरूप यसरी नियूक्त शिक्षकको सुविधा तथा पेशागत सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि पेशागत संगठनले लिएका हुन्छन् । जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई तलब नपाउने, रोकिने र घटुवाहुने त्रास कम हुन्छ । यसको कारण निजिका शिक्षकको जस्तो बाहिर देखिने पेशागत प्रतिबद्धता बाहिरी समाजले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकमा देख्दैन । समाजको नजरमा शिक्षण सजिलो पेशा हो, “फलानोले कति सजिलोसँग जागिर खाएको छ”। भन्ने समाज र जागिरे पनि समाजकै कुनै सदस्य भएको कारणले उस प्रति समाजले हेर्ने पूर्वाग्रही विचार र कतिपय सामुदायिक शिक्षकको गैर जिम्मेवार व्यवहार र आचरणले गर्दा निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोणको कारण अभिभावक निजीमा आकर्षित भएको देखिन्छ ।
तेस्रो तथ्य के हो भने माथि भनिए जस्तै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नियमित आम्दानी हुने अनि उ पनि समुदायको सदस्य हुनाले उसको पनि महत्वकाङ्क्षा सन्तानले राम्रो पढुन् र विदेश जाउन, राम्रो जागिर खाउन भन्ने हुनाले यो कुरा नजिले पूरा गर्दछ भन्ने अल्पज्ञान, भ्रम र आफैं प्रतिको अविस्वास हो । सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताले पनि सन्तान निजितर्फ लैजाने प्रवृत्तिको कारण आम सर्वसाधारणमा पनि भ्रम सिर्जना हुन पुग्दछ र सामुदायिक प्रति उपेक्षा हुन्छ ।
चौथो पक्ष के हो भने सामुदायिक विद्यालयमा अरु जतिसुकै सुविधा र व्यवस्था भएपनि केही बाहेक अधिकाँस विद्यालयमा यातायातको सुविधा पुर्‍याउन सकिएको छैन ।जबकि अहिले बढ्दो सहरिकरण र सबारी चाप तथा दुर्घटनाको कारण शहर बजारका सबै अभिभावक आफ्ना सन्तान असुरक्षित हुने महशुस गर्छन् । अर्को तर्फ सम्पूर्ण निजी विद्यालयले अरु सुविधा नभए पनि यातायात सुविधा दिएका हुन्छन् । जसको कारण विद्यार्थी सजिलो र सुरक्षित रुपमा विद्यालय पुग्दछन् । यो कारणले बाध्य भएर अभिभावक निजी तर्फ लम्कनु परिरहेको छ ।
पाँचौ तथ्य के हो भने हरेक अभिभावले आफ्ना सन्तानको व्यवहिरक तथा नैतिक पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन भन्दा पनि उसले प्राप्त गर्ने अङ्क, ग्रेड र स्थानलाई हेर्ने भएको कारण निजी विद्यालयले उनिहरुको उक्त मनोविज्ञानको फाइदा उठाउँदै जसरी पनि उच्च अङ्क, ग्रेड र स्थान देखाएर नतिजा दिन्छन् । यस कार्यमा केही बाहेक अधिकाँस सामुदायिक विद्यालय आफ्नो उत्कृष्ट नतिजा हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापन र प्रचारमा चुकेका हुन्छन् । यसले गर्दा अभिभावकको रोजाइमा सामुदायिक विद्यालय भन्दा निजी विद्यालय हुन पुग्दछ ।
छैठौं तथ्य भनेको विद्यालय व्यवस्थापन हो । निजी विद्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सञ्चालकले नै आफ्नो संस्थाको नाफाको दृष्टिकोणले गरेका हुन्छन् । यसमा कुनै पनि वाह्य हस्तक्षेप हुँदैन र उनिहरुले आफ्नो शैक्षिक गतिविधिलाई प्रचलित कानुन अनुसार स्वतन्त्र गर्न सक्छन् । सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन गठन देखि यसको कार्यमा समेत समसामयिक राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप हुन जान्छ । जहाँसम्म कि अध्यक्ष र सदस्यको छनोटमा निर्वाचन र प्रचार प्रसार गरेर कतिपय अवस्थामा मानिसको ज्यानै गएको घटना पनि छ । यस्तो हुनुको पछाडिको कारणमा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक निर्माण,सामग्री खरिद, शिक्षक नियूक्ति, सरुवा तथा सहमति दिने क्रममा गर्न सकिने आर्थिक चलखेल नै रहेको सबैसामु छर्लङ्ग छ । यसले गर्दा व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको पक्षलाई थोरैले मात्रै जोड दिएको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा आस्था, पहुँच र पैसाको आधारमा शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र कारबाही गर्ने गरिएकोले यसको नकारात्मक प्रभाव सिकाइ र गुणस्तरमा पर्न गएको कारण सामुदायिक विद्यालयलाई अभिभावक र समुदायले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुनगई अभिभावकले निजी विद्यलय रोज्न पुगेका छन् ।
सातौं तथ्य भनेको निजी विद्यालयमा रहेको लगानी हो । नेपालको धेरैजसो निजी विद्यालयमा देशका बाहालवाला मन्त्री, सांसद, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, राजिनीतिक दलका नेताहरुको लगानी रहेको छ। यसकारण देशको राष्ट्रिय, तथा स्थानिय स्तरको शिक्षा योजना तयार गर्दा अप्रत्यक्ष रुपमा सामुदायिक विद्यालयलाई नकारात्मक असर गर्ने र निजी विद्यालयलाई पक्षपोषण दिने खालको निति, योजना तयार गरिन्छ र सामुदायिक विद्यालय विगारेको सम्पूर्ण दोष शिक्षकलाई दिइन्छ र जसले गर्दा निजीमा विद्यार्थी लैजान सजिलो बनाएको छ ।
आठौं तथ्य भनेको प्रचारप्रसार तथा समाचार पनि हो । निजी विद्यालयले आफ्नो प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा मिडियामा ठूलो लगानी गरेका हुन्छन् । यसले गर्दा उनिहरुको प्रचार सहितको समाचार आउँछन् भने सामुदायिक विद्यालयले प्रचारप्रसार र समाचारमा खासै लगानी गरेको पाइन्न । जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयका राम्रो अभ्यासहरुले पनि मिडियामा स्थान कमैमात्र पाएको देखिन्छ भने कमिकमजोरीको नकारात्मक प्रचार समेत गरेको पाइन्छ । आजको समाज सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको भर परि यसैको विस्वास बढि गर्ने समाज भएकोले सामाजिक सञ्जाल र समाचारको नकारात्मक असरले अभिभावकमा सामुदायिक विद्यालय प्रति विश्वास घटेको देखिन्छ।